Dharka Drake: Xilliga ugu Fiican Dharka iyo Hab -dhaqameedka - Style
Dharka ugu Wanaagsan Drake ee Waqtiga oo dhan
Waa hagaag noqo kan ugu horreeya ee qira, Qaabka shaqsiyeed ee Drakes had iyo jeer ma ahayn wax guriga lagu qoro. Intii lagu jiray sanadihii hore ee iftiinka, wuxuu xirtay xoogaa doorashooyin xoqan madaxa ah. Laakiin sanadihii la soo dhaafay, markii uu u xuub siibay inuu yahay rapper -kii ugu weynaa adduunka, qaabkiisa ayaa is beddelay. Maalmahan, si raaxo leh ayuu ugu socdaa haadkiisa wuxuuna sii ahaanayaa mid loo tixgeliyo inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu rafcaanka badan maanta.
Isagu had iyo jeer ma quusto dharka dhifka ah iyo kabaha kabaha sida Travis Scott. Ma xiran karo wax kasta oo uu rabo oo ka baxsado sida ASAP Rocky, ama jiidista midabada neon sida Tyler, Abuuraha. Wuxuu qaadaa habab aad u xeelad badan. Raad-raacyada Stone Island, retro Nike isboortiga, iyo suudka loo habeeyay oo khaas ah ayaa dhammaantood noqday aasaaska dharka-33-jirka. Qaybaha bayaanka ayaa marba marka ka dambaysa la siidaayaa iyo sidoo kale sida dharka duugga ah, maaliyadaha tuurista ee aan caadiga ahayn, ama iskaashiyada Sare ee qiimaha leh. Marka uu doonayo inuu dib u soo celiyo kooxdiisii, ka filo qaybo ka mid ah sumadda dharka OVO inay iyaduna muuqato.
Hadda taas Wiil Jaceyl oo La Xaqiijiyay waa halkaan, waxaan u dabaaldegeynaa albums -ka sii -deynta bytakinga fiiri qaar ka mid ah honcho madaxa ee OVOs labbiska ugu wanaagsan sanadihii la soo dhaafay. Laga soo bilaabo Stoney ilaa Brioni, waa kuwan qaar ka mid ah kuwa ugu cadcad.
Hallway qarsoodi ah
Hubaal, sannad walba aad buu ugu weyn yahay Drake, laakiin 2015 waxay u muuqatay mid si gaar ah u weyn fannaankii Toronto. Bishii Sebtember markii taamnimadan uu ku dhajiyay Instagram -ka, wuxuu ku dhex jiray hilibkiisa sumcadda leh Meek Mill, Wakhti intee le'eg Nolosha hadda uun baa la siidaayay, oo Khadka Tooska ah wuxuu ku sii qulqulayay garaaca weyn ee ay noqon doonto. Macnaha guud ee waqtiga, tani waa uun jiilaal nadiif ah oo ka habboon Drake. Waxaad dhahdo waxaad ka dooneyso qaabkiisa, marwalba wuxuu lahaa ciyaar aad u qurux badan oo xidhashada dharka. Jaakaddan barafka ah ee madow iyo madow ee barafka barafka leh ee loo yaqaan 'North Face' ma aha mid ka reeban. Kabaha cusub ee kabaha Timberland ayaa dhammaystiraya ku habboonaanta cimilada qabow ee caadiga ah.
Garaash qarsoodi ah
Mid ayaa ku doodi kara in Drake uu lacag badan ka sameeyay Juventus isaga oo ka ruxay maaliyadan casaanka ah kooxda kubbadda cagta Talyaaniga sannadkii 2016. Iska ilow habaarka Drake, kani waa maaliyad nadiif ah. Midabada ubaxyada midabkoodu u eg yahay, iyo Rolls Royce Phantom xagga dambe, waxay ka dhigtaa dabacsanaan khiyaano caadi ah.
Dhismaha ilaa Drakes album afaraad ee studio Aragtiyo sannadka 2016 wuxuu lahaa taageereyaal adag iyo kuwo aan caadi ahayn oo filayay jir shaqo caadi ah oo aan la dafiri karin. Ilaa maantadan la joogo, dadka qaarkood waxay dareemayaan in albumku uusan ku noolayn buuqii. Kuwo kale ayaa koray si ay u jeclaadaan mashruuca, kaas oo ka dhex muuqday sida Controlla iyo U With Me? Wax fikrad ah ha ka qabtid albumka, ma dafiri kartid in sawirka la socda uu dab ahaa. Mid ka mid ah sawirradii ugu fiicnaa ayaa arkay Drake oo baraf ka soo baxay jaakad dhogorta dhogorta leh oo taagan hortiisa gurigiisa, eyga oo gacanta ku jira, iyo garabkiisa madow ee Rolls Royce Phantom. Toos u noqo xaaladda Donzzy midkan.
Drake wuxuu lahaa qaar ka mid ah daqiiqadihiisii ​​ugu fiicnaa markii uu fadhiyay maxkamad si uu ugu farxo kooxda magaaladiisa, Toronto Raptors. Drizzy wuxuu xirtay dharkan qaaska ah oo dhan isagoo ka soo qeybgalaya Scotiabank Arena asaga oo wata OVO compadre OB OBrien oo ruxaya jaakad Gucci oo nylon cagaaran ah oo leh monogram daabac Gucci si uu u dhigmo. Miyuu ahaa mid la xisaabiyey sharaf u ah Juelz Santana ? Si dhab ah uma garanayno, laakiin waxaan jecel nahay inaan sidaas u fikirno.
sida loo sameeyo keeg canjeero
Fiiri Muusikada Muqaalka nool
Drake wuxuu jecel yahay inuu isku duubnaado fannaaniinta soo socda. Hes wuxuu ku booday raadad badan sanadihii la soo dhaafay, taasoo caawisay dhowr fannaaniin sida Migos, ILoveMakonnen, iyo Lil Baby. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan ee tani waa muuqaalkiisa Blocboy JBs 2018 oo ku dhuftay Fiiri Noolaha. Fiidiyowga rasmiga ah ee keli -keli ah, Drake wuxuu ku wareegaa inta u dhaxaysa sacab mugdi ah, laakiin muujinta waa inay noqotaa tan. Dusha sare, Polo NASA Jacket -ka laga soo bilaabo 1994, gabal ka dhex dhacay uruuriyayaal badan. Dabcan wuu ruxayaa surwaallo xamuul Stone Island ah si uu u dhammaystiro muuqaalka. Kaliya fiiri summadaas.
Goobta Aan La Shaacin
Wadashaqaynta Supremes Louis Vuitton ee la sii daayay 2017 shaki la'aan waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn taariikhda dharka dharka. Marka la eego wada -hawlgalayaasha iyo dabeecaddiisa xaddidan, waxay sidoo kale maalmo badan suuqa sare u iibinaysaa summad aad u weyn. Drake, sida iska cad, mar horeba goobihiisii ​​waa la sugay. Halkaan waxaa lagu arki karaa, galaas khamri ah oo gacanta ku jira si uu u ahaado mid heer sare ah, oo ruxaya mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan ee ka soo uruurinta Sare x LV-jaakadda denim-ka daabacan ee monogram-ka. Ma hubno waxa saxda ah ee qoraalkani yahay, laakiin runtii kama horjoogsanayso sida jaakaddu u fiican tahay. Waa hagaag isaga sii markan.
Boqorka yar. Tani waa waxa Drake naftiisa ku tilmaamay inuu ku socdo waddada Omerta ee la sii daayay Juun 2019 si loogu dabaaldego horyaalnimada NBA ee Toronto horraantii sannadkan. Haddii aad u baahan tahay wax caddayn ah, halkan tag. Socodka Drake vs Kanye West saga wuxuu ahaa mid xiiso leh in la raaco. Waxaa jira lakabyo badan. Waad ku mahadsan tahay J. Prince, waxaa laga yaabaa inay jiraan tan badan oo alaab ah oo aan la sheegin, laakiin taasi maahan halkaan ama halkaas. Drake wuxuu weli diyaar u yahay inuu iska tuuro xoogaa xabbadood oo khiyaano ah marka uu dareemo. Halkaan, waxaa lagu arki karaa isagoo ruxaya Waa inaad mar kale dhashaa merch hoodie oo uu naqshadeeyay Suuqa Flea Cactus bishii Sebtember ee la soo dhaafay. Boqor yar, runtii.
2018 Xisbiga Halloween
Haa, tani dhab ahaantii waa dharka Fabolous Halloween. Maya, taasi kama dhigayso nostalgic ku habboon dab yar. Drake ayaa la duubay xafladan 2000-kii mowduuc leh ee 2018 isagoo siinaya qof uu ku tilmaamo mid ka mid ah dhiirigelintiisa ugu weyn ee rap. Waxay ahayd taamkii saxda ahaa ee Loso gashatay Iibso Dhamaan Pt. 2 fiidiyaha muusikada . Garabka Minneanapolis Lakers Kobe Bryant, funaanadda cad ee baakadaha leh, Los Angeles Dodgers koofiyad xiran, iyo baandada buluugga ah ee kore. Fiican. *Codka qalafsan*
Sawirka Getty/Prince Williams
Hey yo! Drake wuxuu ku qubanayay machismo markii uu ka soo baxay funaanaddan Razor Ramon. Xaqiiqdii si ay u bogaadiyaan taageerayaasha legdinta, Ramon (Scott Hall) wuxuu ka mid ahaa mid ka mid ah halgamayaashii xirfadlayaasha ahaa ee ugu caansanaa 90 -meeyadii oo uu ku dhex jiray WWF iyo WCW si loogu faano. T-shaati-gacmeedka guud ee huruudda iyo madow leh kama soo bixin tobankii sano ee kale. Mid ka mid ah shaatiyadaha lagdinta dheeriga ah ee aadka loo qiimeeyo, Adidas surwaal raadraac ah iyo Adidas Climacools cad oo cagaha ayaa sidoo kale matalaya muddo aad u gaaban oo dib u soo ceshaneysa Saddexdii Stripes ee 2018.
Sawirka Getty/Allen Berezovsky
Xaqiiqda: Drake wuxuu sameeyaa muusig aad u fiican. Xaqiiqda: Drake wuxuu jecel yahay Island Island. Sawirkaani wuxuu si sax ah u xaqiijinayaa labada shay. Drizzy wuxuu ka soo qeyb galay Abaalmarinta Muusikada Billboard-ka 2017 oo ku habboonaa Stoney oo dhan. Halkaan waxaa lagu arki karaa isaga oo ku laabanaaya rikoorkan dejinta 13 abaalmarin. Hubi inaad sidoo kale xusuusato cirka aadka u daran ee Air Force 1s lugta sidoo kale. Ku qayli abaalmarintan abaalmarinta aadka u fiican ee ku habboon.
Wiilka Sare ee UK Premiere
Sawirka Getty/Karwai Tang
Hubaal, Drake wuxuu leeyahay xoogaa khaladaad moodo oo suunka hoostiisa ah. Dhammaanteen waan samaynaa Laakiin mar kasta oo uu go'aansado inuu ka soo baxo suudh inta badan waa wax lagu dhufto. Ka soo muuqashadiisa Premier UK ee Netflixs Wiilka Sare bishii Sebtember ee la soo dhaafay ma ahayn mid ka duwan. Suud madow oo caadi ah (waxay u badan tahay caadadii Brioni ama Tom Ford, laakiin ma xaqiijin karto), turtleneck cawl hoosteeda, iyo silsilad dheemman si loo helo. *dhunkada dhunkada*
Semifinal -ka Shirka Bariga NBA ee 2019
Sawirka Getty/Vaughn Ridley
Drizzy ma wareersan marka ay timaado Scotiabank Arena courtide ku habboon. Wixii Semifinal-ka Shirka Bariga 2019, wuxuu ka soo saaray gabal bayaan culus ah, jaakad buluug ah Visvim Kerchief oo jaakad hoos uga soo dhacday ururinta jaceylka-jecel ee Japan Fall/Jiilaal 2012. Wuxuu u hayey qaybaha kale si hoose-funaanad cad, denim dhaqday oo fudud, Nike Air Force 1, iyo hal silsilad dheeman ah oo aad u wanaagsan.
Dhammaadka Shirka Bariga NBA ee 2019
Sawirka Getty/Ron Turenne/NBAE
Drake wuxuu lahaa qaab ciyaareed cajiib ah oo ka mid ah labbiska maxkamadaha oo dhan Toronto Raptors 2019 NBA Playoff. Mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya ayaa ah Tupac oo uu xirtay intii lagu jiray Ciyaartii Lixaad ee Finalka Shirka Bariga, caado 100 Miles hoodie ah oo uu dhiirrigeliyay dabeecadda Pacs Birdie laga soo bilaabo 1994 -kii Xagga Sare. Intii uusan madaxa ku xirin bandana sida halyeeygii rap -da ee dambe, wuxuu ku sii nagaaday astaan ​​isagoo mid qoorta uga xiran yahay. Drake wuxuu ku bixiyay maroojintiisa gaarka ah isaga oo ku xardhay Kawhi Me Wabi dhabarka gadaashiisa xarafyo cadcad, oo abaalmarin u ah xiddigga Kawhi Leonard. Ivory C abeke Nike Air Force 1s cagaha waa uun gunno lagu daray.
Finalka NBA ee 2019
Sawirka Getty/Garrett Ellwood/NBAE
Laba arrimood oo aan awoodnay inaan ilaa hadda dhidibada u taagno, Drake wuxuu jecel yahay Raptors Toronto wuxuuna jecel yahay inuu ku yaraado labiskiisa. Tani waxay ku habboon tahay Ciyaarta Mid ka mid ah Finallada NBA ee 2019 ee u dhexeeya Toronto Raptors iyo Warriors State Golden waxay hubiyaan labada sanduuq. Halkaan waxaa lagu arki karaa isagoo u dabaaldagaya barxadda maaliyaddii tuurista ee Dell Curry Raptors. Dell waa aabaha ilaaliyaha barta Warriors, Stephen Curry. Xulashada funaanadda ayaa Twitterka dab qabadsiisay habeenkaas. Dell iyo xaaskiisa Sonya ayaa xitaa la dhacsanaa xulashada daaweeyayaasha . Habaar Drake ma jiro oo halkan lagu soo bandhigay. Raptors ayaa ku guuleystay ciyaarta 118-109. Drake wuxuu ku ciyaarayaa shax isaga oo ku habboon. Dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ciyaaraya jeegaga.
sida loo sameeyo funfetti cake ka xoq
Sawirka iyada oo loo marayo Getty/Hollywood Adiga/Star Max
Kani waa mid ka mid ah dharka Drakes oo lahaa internetka oo raadinaya hab ay ku helaan naftooda bishii Luulyo 2018. Waxaa laga yaabaa inuu dhiirrigeliyay Dabagaale gooyay Finesse, wuxuu ka soo dhex baxay jaamacad oranji ah oo ka tirsan shaqaalaha Tennessee oo leh xarfaha si taxaddar leh loo xardhay si loo akhriyo Finesse. Gabalkan waxaa naqshadeeyay astaanta lowkeyga icantdecideyet kuwaas oo hubaal ah in ay bogaadiyeen guuxa uu soo saaray mucjisada weyn. Sida la og yahay inuu sameeyo, Drake wuxuu ku hayaa raaxo leh labo surwaal oo dabaq ah oo nylon madow ah iyo isbarbar dhiga Nike Air Max Plus si uu u dhammaystiro muuqaalka Los Angeles ee caadiga ah.
Madasha Nike 2020
Markii Nike ay u soo bandhigtay show -ga Runway -ga 2020 -ka Bandhigga Toddobaadka Farshaxanka New York, Drake ayaa goobjoog ka ahaa oo isku dubbariday dhar u dhigma Virgil Abloh. Jaakadaha ay soo xirteen ayaa ahaa Alpha Jacket LT Gen 2 Multicam waxaana laga iibiyaa oo kaliya kuwa sharciga fuliya ama shaqaalaha militariga. Haa, haa, waxaan u malaynayaa inaad dhihi karto Drake wuxuu dhigay sharciga sharcigaan waalan ee ku habboon oo lagu daray jiinis madow iyo Air Maxes.
Chrome Hearts iyo Wajiga Waqooyi
Sida aan wada ognahay soo bixitaankan aadka loo soo jiitay Wiil Jaceyl oo La Xaqiijiyay , Drake wuxuu jecel yahay Quluubta Chrome. Si aad u badan, waxaan helnay a Wiil Jaceyl oo La Xaqiijiyay x Quluubta Chrome waxay isku biiriyaan bilo kahor intaan albumku dhicin. Halkaan waxaan ku aragnaa sida Drake uu ugu celinayo sumadda qiimaha badan ee fadhigeedu yahay Los Angeles, isagoo xiran labo ka mid ah summadaha jiinisyada caanka ah ee lagu habeeyay dhejisyada maqaarka. Dharkaani wuxuu soo bandhigayaa isku dhaf wanaagsan oo sare iyo hooseba. Is-hoosaysiin 700-Buuxi North Face Nuptse, Nike Air Force 1s oo dhan-cadaan ah, hoodie cawlan, iyo boorsada Louis Vuitton ayaa dhammaystiraya taamkan weyn ee Drake.
Jeegag Ku Saabsan Xargaha
Sawirka BG020/Bauer-Griffin/GC Images/Getty
Drake wuxuu daacad u yahay shirkadda Nike. Nike xitaa waxay iskaashi la sameysay Drake si ay u soo saarto khadkii dharka-u-waxyoonay ee u gaarka ahaa Nocta. Waxaa weheliya soo saarista Nike oo aan rasmi ahayn Wiil Jaceyl oo La Xaqiijiyay merch, aad bay u caddahay in Drake uu si qoto dheer ula jaanqaaday astaanta. Oo haddii fiidiyowga muusigga ee Laugh Now Cry Later uusan ka dhigin Drakes jaceylka Nike inuu kugu filan yahay, tan ku habboon Drake oo xiran Nike min madax ilaa suul ayaa hubaal noqon doonta.
sida loo sameeyo dhibic dahab dhibic
waqti intee la egtahay bandhigyada cusub ee netflix
waa kuwee ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kubbadda koleyga abid
sababta ay buskudka saqafka sare u fiican yihiin
sidee bay u sameeyaan orso cirrid leh